Ka beddel GoogleEarth illaa AutoCAD, ArcView iyo qaabab kale - Gofumed
Nofeembar, 2007 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps
In kasta oo waxyaalahan oo dhan la samayn karo codsiyada sida Manifold, ArcGis kaliya adoo furaya kml oo u dhoofinaya qaabka la raadiyay, raadinta Google kml ee dxf waa kordhay. Aan aragno qaar ka mid ah sifooyinka ardaygu ka bixiyo Jaamacada Arizona si lacag la'aan ah loogu beddelo xogta Google Earth si loo isticmaalo qaababka loo isticmaalo Codsiyada sida AutoCAD, Microstation, ArcView, ArcMap, GPS y Excel
1 Ka beddel Google Earth-ka ArcView/ GIS (.shp)
cunt app this waxaad dooran kartaa nooca xogta of file qaabka (KML si SHP) ah, dhibcood, xarriijimo ama geesoolayaashu, waxa kale oo aad ka bedeli kartaa qaabka wadataa keeni KMLs (Laata / dheer wgs84) si ay qaabab kale, sida UTM. Natiijadan ayaa waxa ay yihiin saddex archives aasaasiga ah, halkaas oo tirooyinka waa .shp, .dbf halkaas oo xogta iyo .sxf ​​meesha index ka da'ayeen yihiin.
2 Ka beddel Google Earth-ka AutoCAD (kml ilaa dxf)
cunt app this waxaad ka heli kartaa macluumaadka KML si DXF format (KML si dxf), taas oo ah qaab caadi ah in la furi karaa AutoCAD, Microstation iyo dhufto ee kale CAD. Waxaad dooran kartaa inaad si gooni ah u haqab tiriso xogta (dhibcooyinka, dariiqyada, cirbadaha) ama dhammaantood markiiba.
3 Ka beddel Google Earth-ka Excel (.csv, txt, tab)
Tani aplicación doodii xogta laga fayl KML iyo doodii (wadataa x, y, z) qaab .csv in aad furi karaa Excel sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad doorato haddii caga waa text (.txt) ama meelaha soocay text (tab) . Isla sidaas oo kale ayaa kuu ogolaanaya inaad si gaar ah u soo qaadato bartilmaameedyada wadooyinka iyo garaannada.
4. Ka beddel Google Earh ilaa GPS (kml ilaa gpx)
In kastoo app this wuxuu sameyn karaa dhammaan hawlaha hore, wuxuu u shaqeeyaa xariiq, kan kalena wuxuu leeyahay ikhtiyaarka ah inuu awoodi karo inuu beddelo .bln y .gpx taas oo ah qaab la qabsado oo badan oo leh GPS. Waxaad sidoo kale u habeyn kartaa habka isku-duwidda, dooranaya qiyaasta, qoraalka iyo meesha.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan qalabkan waa in ay yihiin bilaash, ama ugu yaraan hadda. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin inay halgan waxoogaa waayo, iyagu waa macros iyo daalacashada ama gaadmada ah Windows yeelan karaan heerarka ammaanka aan u ogolaadaan. Sidoo kale qaar ka mid maaha kuwo la shaqeynaya nuquladii ugu dambeysay ee Google Earth.
Sida uu sheegayo abuuraha ee qalabkani, dareenkiisa oo uu waqti ku qaato oo la wadaago iyaga ma uusan isaga tagin daqiiqado si loo saxo dhiqlaha, si uu u sameeyo buug ama si loo cusbooneysiiyo qaar ka mid ah kuwa waayeel ah
Si aad u dhameysato ubaxyada ujeeddadan ee Zonums, waxaa jira seddex plus plus Google Earth:
Ver el Tirakoobka Mareykanka ee Google Earth
Ver isku-duubnaanta dhibic (lat / lon) ee UTM, oo leh aagaggooda
Ver iskudhafyada hoose ee muuqaalka muuqaalka ah ee Google Earth (xadka), oo ku habboon in aan dhibicda u galin chilazo sida aan u qabanay markii aan aragno sida loo daboolayo image image Google Earth.
En boostadan ayaa faahfaahsan qalabka kala duwan ee Zonum ay u leedahay injineeriyadda, CAD iyo GIS.
Post Previous«Previous Ku soo dhawow Cartesia Xtrema
Post Next Sidee looga soocaa Sawirada Google EarthNext »
28 Jawaab in "Ka beddelaan GoogleEarth ilaa AutoCAD, ArcView iyo qaabab kale"
Iyadoo mid ka mid ah qaab-dhismeedka Excel ee ka muuqda linkkan
Angel G isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan ugu baddali Kartaa km UT? adoo aan hal mid u samayn, sida aan ku arkay bogag kale.
Mawduucan ayaa lagu sheegay qodobkan
Waxay u ogolaataa inay u sameyso isku-duwaha UTM, iyaga u diraya kml kaas oo ah nooca uu aqbalay Google Earth.
jose julian isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan taageerno aniga oo ii sheegaya inaan kari karo isku-duwayaasha shahaadooyinka, daqiiqadaha iyo ilbiriqaadka iyo haddii ay sidaas tahay, ama haddii kaliya ay isku-duweyso UTM
Tijaabi Zonum, waxaa jira codsi toos ah oo kuu oggolaanaya inaad hoos u dhigtid meelaha sare. Haddii aad rabto wax aad u xoog badan, waxay la mid noqon doontaa Plex.Earth oo hoos u dhigaysa moodalka dijitaalka ah.
Hambalyo! qof ayaa ii sheegi kara sida loo dhoofin macluumaad sare dhulka google ka in looga shaqeeyo ArcGis, waxaan barnaamijka AutoCad haysan, mahadsanid, waxaan rajaynayaa Ma i caawin kartaa, goobta waxa xiiseeynaya aniga waa Peninsula Yucatan ah, Mexico.
vicente isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa jira barnaamij lagu magacaabo 3d mashiinka, kaas oo ku siinaya isuduwayaasha tooska ah ee x, y, z
Waxaad taas ku samayn kartaa barnaamij kasta, oo ay ku jiraan ilka furan sida gvSIG
Luis enrique isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan ku caawiyo inaan u gudbiyo feylalaha autocad-ga google-ga ee KLM mana heli karo macluumaad
Waxaan ubaahanahay inaan baddalo macluumaadka iCoco google-ga ee faylasha KLM
Kole: Taasi waxay kuxirantahay waxaad rabto inaad sameyso, maxaa yeelay xogtaada socodkaaga ayaa ka saxsan Google Earth. Hadaad rabto inaad la mid noqoto sawirada Google Earth, waa inaad horay u habeysaa.
Iyo qaab noocee ah ayaad leedahay? Ku dhowaad barnaamij kasta oo GIS ah ayaa u dhoofin kara qaabka shp
gluten isagu wuxuu leeyahay:
hello way i caawisaa, waxaan u baahanahay inaan bedelo xogta isuduwidda UTM illaa SHP.
sidee baan u qaban karaa
kole isagu wuxuu leeyahay:
hello jeclaan lahaa in la ogaado sida aan mag kartaa desface si superimpose shapefile la TrackMaker dhulka google .. Waxaan qiyaasayaa saxo duwo Excel .. haddii ay sidaas tahay file qaab oo dhan Kiera mari google .¿deberian ka hor in la saxo? ama noqon wax argument? .. Ma aqaan. Waan qabaa dhibaatadan. caawimo fadlan
hello ..estoy shaqo oo aan lahayn dhinacyada gobolkii osorno ... estan..y kiero ma weydiiso sida aan ka heli kartaa dhulka google iyo barnaamijyada waxaan u leeyihiin in ay noqon hacerlo..nos ka codsanaynaa in kama ay helin meel ...
Waxaan rabaa inaan bedelo faylka csv si dwg iyo awood u yeesho in ay ka shaqeeyaan cad
Waxa la sameeyo si aad uhesho cyber-dhunkasho. hehe
Walaacsan, annaguna waa inaanu dalbanaa.
Maria Jose isagu wuxuu leeyahay:
Thanks to badan laakiin runta ayaa ah in goobtan ay tahay mid aad u wanaagsan
Google Earth waxay ubaahan tahay juqraafi juqraafi ah oo leh wgs84 xogta.
Waxaan u malaynayaa in waxa aad ku hadashid xy ku jiraan isku-duwaha utm, oo leh aag cayiman iyo xarun gaar ah, oo aad u baahan tahay. Waxaad ubaahnaan doontaa inaad tan ugu turjunto iskuduwaha juqraafiyeed, taas ayaa ah waxa loo yaqaan Google Earth.
Miiska ugu sareeya ee aan ku sheegay faallooyinka hore ayaa ka dhigaya beddeliddaas. Sidookale hubso inaad fahanto waxa utm iyo iskuduwaha joqoraafi ahaaneed, sax waxaa jira cilaaqaadyo kusaabsan mowduucyadan
Mahadsanid jawaab celinta, eeg waxaan ka walwalsanahay in aan sameeyo waxyaabaha soo socda iyo waligay ma aanan qaban (waxaan baarayaa mawduuca markii ugu horeysay):
Uma baahnin in aan bedelno faylasha faylka ee qaab-dhismeedka klm.
Waxa ay tahay inaan sameeyo waa inaan ka gudbo isku-duwaha "x" iyo "y"
kaas oo u adeegsada arcview goob, markaa waa inaan xisaabiyaa "x" iyo "y" laakiin waa inaan u adeegsadaa google earth si aan u arko bartaas.
Waxay ii sheegeen in iskudhafyada goobtu aanay isku mid ahayn marka la eego kuwa ku jira dhulka google iyo waxa aan u baahanahay waa inaan ku bilaabo xisaabaadka ugu horreeya ama helno kuwa kale.
Miyaad i caawin kartaa ama sheegi kartaa meesha aan ka heli karo wax iga caawiya?
Haddii aad rabto in aad beddesho isku-duwaha UTM ee juqraafi, taas oo la samayn karo iyadoo leh Excel
Haddii aad rabto in aad bedesho faylka qaabka ee klm, waxaad isticmaali kartaa fdo2fdo
Hagaag, suurta gal ma tahay inaad siiso x iyo y iskuduwaha arcview-ka csv, Excel iwm, mase gudbi karaan x iyo y iskuduwaha kale ee csv, tayo iwm ee google earth?
Taasi micnaheedu waa aniga oo sharraxaya nafsadeyda wax yar, haddii aan haysto isku xirka x iyo y meela gaarka ah ee arcview ma jiraa codsi ama algorithm iwm oo ii oggolaanaya inaan helo xeeraha ay google dhulka isticmaali lahayd?
Haa, waxaad soo dejisan kartaa dusha sare ee 3D Google Earth adoo adeegsanaya AutoCAD Map
Carlos Gonzales Soria isagu wuxuu leeyahay:
Sidaa darteed ma jiraan wax codsi ah in laga helo xogta X, Y, Z ee dhulka google?
Marka aan ku dhex maro dhulka google marka aan guurto cursorka, waxay i siisaa iskudhafka leh dhererkiisa, isla markaan marka aan soo jiito dareenka wuxuu u shaqeynayaa sida asalka ah dhulka.
Haddii ay jirto wax loo heli karo xogtan, waxaan aad ugu mahadcelin doonaa qof kasta oo sharaxaya mawduuca
suurtagal maaha in la helo dhererka noocan ah codsiyada noocan ah, maxaa yeelay taasi waa isku-duwo ku yaala ellipsoid, taas oo ah isla dhererka isla markaana aan ahayn qaabka dhulka.
Ka dib markii la dhoofiyo feylka Google Earth waxaan aqriyaa Klm waxaanan kaliya heli karaa isku-duwegyada X, laakiin ma aha dhererka, ama maxaa dhacaya markaan heli karo isku-duwayaasha X, Y, Z? adeegso dhulka google 5-0
HUMBERTO TAPIA isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAN RABBAHAY KAA SAMEEYAA kml2sph, HADAAAN AANAN FARSIN SAMEEYAAN SIDII AAD U HESHO XUQUUQDA KASTA EE KA SAMEE MUHIIMADA GUUD EE GUULEBKA ITA
Antonio Ruiz isagu wuxuu leeyahay:
Codsiga weyn ee isbedelka KML ee SHP, inkasta oo ay jirto qiyaasta mitirka 8. waxay weli noqon karaan kuwo waxtar leh. Thanks.